အစ်မ သားကလေ.. ၀က်ခြံက သူများတွေလို မဟုတ်ဘူး .။ လူမမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်တာ.။ဆံပင်ကြားတို့.. နားရွက်အထဲထဲတို့.. ဆံပင်ကြားကဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် နားရွက်ထဲတို့ နှာခေါင်းထဲတို့ကျတော့ ဘာနဲ့ဆိုင်လဲ.. ဘာလုပ်ရမလဲ..။ အရင်ကတည်းက မျက်နှာပေါ် မပေါက်သလောက်ပဲ.။ နားရွက်ထဲ ၊နှာခေါင်းထဲက. ပိုနာသလိုပဲ. ။
အကြံပိုင်သောကင်ဒီလေး..စာအရေးအသားပြေပြစ်ပြီးရှင်းလင်းတယ်။ ထိမိတယ်။စာရေးကောင်းသူလေးမို့ ပိုသဘောကျသွားပြီ။အိုင်အိုရာ
စာဖတ်သူအားလုံး လှပတဲ့ အသားအရည် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပြီးcandy လေးလဲ ထာဝရ ရှင်းသန့်ကြည်လင်ပါစေလို့ပြန်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်နော်ချစ်တဲ့ sis jasmine
Shwe Beauty မှာဖတ်ပြီးပေမယ့် ပိုပြီးမှတ်မိအောင်လို့ ဒီမှာလဲထပ်ဖတ်သွားပါတယ်း) ချစ်ခင်တဲ့ camomilla
ကောင်းတယ်သကြားလုံးလေးရေ ဂွတ်ထတယ်အိုတဲ့သူတွေလဲလုပ်ရမယ်အေ..အိုဘီဆိုတော့ကျားကန်ရမယ်း))ချစ်တဲ့အမဂျီးဂျာရစ်
မမကန်ဒီရေ...အလှအပပို့ စ်လေးတင်ချင်ပေမယ့် အခုထိမတင်ဖြစသေးဘူး။အလှအပကိုလည်း စိတ်ဝင်စားလို့ လေ။နောက်ထပ်လည်း စာဖတ်သူအတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ ဆောင်းပါးကောင်းလေးတွေရေးပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။အလည်လာတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ထော်ဦး
ညလေးရေ မမတော့ဝက်ခြံမပေါက်တတ်ပေမဲ့ချစ်သူလေးအတွက်ဖတ်သွားတယ်နော် :Pစိတ်ကို ဖြူဖြူစင်စင်လေးနဲ့ ကြည်လင်အောင်ထားပါလို့.. စိတ်ကြည်မှ ရုပ်ကြည်တာလေ :)
အော်မေ့တော့မလို့..ပါးနဲ့မထိအောင်ဖုန်းပြောဆိုတော့Death Notes ကား..ထဲ.က L လိုမျိုးပြောရမယ်ထင်တယ် အစ်မ. ခိခိ.
ဒီကောင်လေး လူကိုလာနောက်နေတယ်.. ဟွန်း ဟွန်းလူမမြင်တဲ့နေရာမှာပေါက်တာ အပူကြောင့်လို့ထင်တယ်။ သေချာတော့ မသိဘူး >.<
2087.. Mobile Guide ဂျာနယ် အတွဲ (2) အမှတ် (3) 22.5.2013
Juice PRO live wallpaper v3.0.Apk(4.56 Mb)
အသဲကွဲသီချင်းဆိုရတဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဆိုတေး
နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ပါသူငယ်ချင်း…………
Android အတွက် VZO Chat